माछापुच्छ्रे बैंककाे खुद नाफा १ अर्ब ७० करोड, कति बाड्ला लाभांश ?
काठमाण्डौ । माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ७० करोड खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्ष (७४/७५) मा बैंकले १ अर्ब २४ करोड नाफा कमाएकोमा गत आर्थिक बर्षमा ३६.३२ प्रतिशतले नाफा बढाएको हो ।
बैंकको चुक्तापूँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकले १ अर्ब ७० करोड नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको नाफा १ अर्ब २४ करोडमा सीमित थियो ।
अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ७३ करोडमा सीमित खूद ब्याज आम्दानीलाई बढाएर ३ अर्ब ५३ करोडको उचाई चुमाएको बैंकले १० अर्ब १६ करोड ब्याजबाट मात्र आम्दानी गरेको छ । यो अवधिमा ब्याज खर्च समेत ६ अर्ब ६२ करोड भएका कारण खूद ब्याज आम्दानी ३ अर्ब ५३ करोड रहेको हो ।
समीक्षा अवधिमा बैंकले ८५ अर्ब १९ करोड निक्षेप संकलन गरी ७५ अर्ब २९ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा ७१ अर्ब १४ करोड निक्षेप संकलन गरी ६२ अर्ब ४१ करोड बढी कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा बैंकको रिजर्बमा भने सामान्य संकुचन आएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ४६ करोड रहेको रिजर्ब घटेर यो वर्ष १ अर्ब ४५ करोडमा सीमित बन्न पुगेको हो ।
कम्पनीको रिटेन अर्निङ ८० करोड ७७ लाखबाट बढेर १ अर्ब ७० करोडको उचाईमा पुगेको छ । यसरी कम्पनीले रिटेन अर्निङतर्फ १११.१७ प्रतिशतको छलाङ मारेको देखिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खराब कर्जा अनुपात ०.३७ प्रतिशत मात्र छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ०.४४ प्रतिशत रहेको थियो ।
अघिल्लो वर्ष १८.८१ रुपैयाँ रहेको प्रतिसेयर आम्दानी बढेर यो वर्ष २२.९८ रुपैयाँको उचाईमा पुगेको छ भने क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो १२.८८ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ७.८८ प्रतिशत, सीडी रेसियो ७६.९८ प्रतिशत, बेस रेट १०.३७ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो. वर्ष क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो १५.३६ प्रतिशत थियो । राष्ट्रबैंकले तोकेको ११ प्रतिशतको सीमा नजिक यस्तो अनुपात आएको देखिन्छ ।
बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३९.५७ रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात १२.४८ गुणा रहेको छ ।